रोशी गाउँपालिकाले रेडियोबाट कक्षा संचालन गर्ने! यस्ता छन् कार्यपालिका बैठकको निर्णय – Radio Roshi
रोशी गाउँपालिकाले रेडियोबाट कक्षा संचालन गर्ने! यस्ता छन् कार्यपालिका बैठकको निर्णय
जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले रेडियो बाट कक्षा संचालन गर्ने भएको छ । आज अध्यक्ष डिबि लामाको अध्यक्षतामा बसेको ४५ औँ कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले रेडियो रोशी १०१.६ मेगाहर्जबाट बाल विकास देखि कक्षा १० सम्म असार १ गते देखि रेडियो कक्षा संचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पदम बहादुर लामाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले लक्ष्मी नारायण मावि र मंगल जनविजय माविमा हाल ७५ बेडको क्वारेन्टाईन रहेकोमा थपेर १ सय पुर्याउने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सेवा सुविधा वापत दिईदै आएको रकमको ५० प्रतिशत प्रोत्साहत भत्ता उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । गाउँपालिकामा रहेको ११ वटा स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरुलाई आलो पालो गरी क्वारेन्टाईनमा खाटाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
अहिले कृषकहरुको मुख्य समस्या रहेको अमेरीकन फोजी किरा नियन्त्रणका निमित्त प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनुसार विषादी वितरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेका प्रवक्ता लामाले जानकारी दिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को योजनाका निमित्त जेठ २७ गते भित्र प्रत्येक वडाले योजना तर्जुमा गरेर गाउँपालिकामा बुझाउनु पर्ने पनि बैठकले गरेको छ र २०७७/०७८ को कार्यविधि अनुसार ढुंगा गिट्टीको कर असुली सम्बन्धी ठेक्का पट्टा आवहान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता लामाले जानकारी दिए ।
बैठकमा उपाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी बर्तौला, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डम्बरु दाहाल र सम्पुर्ण वडाका अध्यक्षहरु उपस्थित रहको थियो ।